किशोर नेपालको वालबाट
हाम्रो अत्यन्त मितव्ययी सरकारलाई पैसा खर्च गरी–गरी एनआरएनको सम्मेलन किन गराउन मन लागेको होला ? विदेशमा बसेका बेसोमतीहरूको फौजले के लछारपाटो लगाउने रहेछन् कुन्नि !
सरकारले चिनियाँ रेल ल्याउन खोजेको जनतामा धाक जमाउन हो । चीन वा भारत जताको रेल आए पनि ज्याला कमाएर खाने जनतालाई फाइदा हुँदैन । न व्यापार छ, न उद्योग । रेल नभै नहुने चीन–भारतलाई हो । उनीहरूलाई चाहिए रेल आउँछ, नत्र ठन्डेइच !
उहिले–उहिले चीनमा रोग निको पार्न बिरामीलाई माओको रेड बुक पढ्न लगाउँथे रे । अहिले सीको माला जप्दा दाँत दुखेको निको हुन्छ होला त ?
नेताले सलामी खाने र पुलिसले मान्छे मार्नेबाहेक अरू त समाचार नै बन्न छोडे, हाम्रो नेपालमा । पिर्का र टेबलमा उभिएर सलामी र गुलेली हानेर मारेका ढुकुरजस्ता मानिस, दुवै भाइरल !
अचेल सुनको चर्चा कतै सुनिँदैन । सुन ल्याउने क्रम बन्द भएको हो कि सुनकै प्रोफाइल घटेको हो ?
देशका नेता भनेर कहलिएकाहरू किन पुरातात्विक उत्खननमा भेटिएका भग्न मूर्तिजस्ता देखिएका हुन् ?
धङधङीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । कि सी–पथ रोज्नुपर्‍यो, कि ट्रम्प–मार्गतिर लाग्नुपर्‍यो । गम्भीर छलफलन गर्ने इन्डो प्यासिफिकको, तालिम लिने सी–पथको ? पथै चाहिएको भए प्रचण्ड–पथ छँदै थियो, ओली–पथ पनि बन्दै थियो । बुद्धिमा हुँडार पसेपछि के लाग्छ र !
हामीलाई त उड्दै नउड्ने, गुड्दै नगुड्ने र बोल्दै नबोल्ने नेताहरू चाहिएको छ । धेरै उड्ने, धेरै गुड्ने र धेरै बोल्ने नेताहरूले धेरै चल्ने र धेरै चिच्याउने सामाजिक अभियन्ता जन्माए । नैतिक प्रदूषण त छँदै थियो, ध्वनि प्रदूषणले त झनै सतायो ।
के भएको हो, नेपाली समाजमा ? दाल, चामल र तरकारीको भाउ अहिलेको अहिल्यै बढ्छ । विचारको भाउ वर्षौं यथावत् रहन्छ । के हो यस्तो ?
भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरू सपिङ सेन्टरबाट नखसेर के गरून् त ? खस्नलाई शहरमा धरहरा छैन । डुब्नलाई रानीपोखरी पनि छैन ।
साना पार्टीका ठूला नेताको विशेषज्ञता बनेको छ, चन्दा उठाउनु । यिनीहरूलाई लागेको छ, देश चन्दै उठाएर बन्नेछ । आफ्ना लामा–लामा लेखका आफैँ पाठक र अन्तर्वार्ताका आफैँ प्रशंसक ! अतीतको गुणगान, सबै नेतालाई भन्नैपर्ला– शब्द महान्, उद्देश्य लहूलुहान !
शहरका ट्याक्सीहरू मिटर लुकाएर चलाउँछन् । ग्राहकले मिटर देख्दैन । मिटर–घट्ट घुमेको र पैसा बढेको देख्यो भने अचानक ग्राहकको मुटुको धड्कन बढ्ला भन्ने चिन्ता ट्याक्सीवालालाई पनि हुँदो रहेछ ।
नबुझेको कुरामा जिज्ञासा राख्न पाइन्छ होला । गैरन्यायिक हत्या धेरै सुनियो । नेपालमा न्यायिक हत्याको प्रावधान पनि छ कि ? हत्या न्यायिक र गैरन्यायिक कसरी छुट्याउने ?
विष्णु सापकोटाको वालबाट
०५ बैशाख २०७७